သစ်နက်ဆူး: စုဘူးလေးနဲ့ သူခိုး
သားမှာစုဘူးလေးတစ်ခုရှိသည်...ကိုယ်ကလည်း ခွင့်ပြုသည်...။ သားရဲ့ မေမေကတော့ သားရဲ့ စုဘူးလေးကို အမြဲထပ်ဖြည့်ပေးနေကြ..။ သားက အမေနဲ့အမတွေ ဈေးဝယ်လို့ ပိုတဲ့ ငွေလေးတွေတွေ့ ရင် သူ့ စုဘူးလေးထဲကို ထည့်သည်...။
ဘယ်အခါဘဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံ ယူလာပြီးလျှင် ကိုယ့်ကို လာပြောသည်...မျက်စိလေးတစ်ဖက်မှိတ်ပြရင်း“ သား မေမေ့ပိုက်ဆံပိုတာ ယူလာတယ်..သားစုဘူးထဲထည့်မယ်နော်” ဟုပြောတတ်သည်...။
ဒါပေမယ့် တန်ဘိုးများများ မယူ..အကြွေလောက်မျှသာ..။ တခါတရံ ပိုက်ဆံများများတွေ့ လျှင် “ ဒါဘယ်သူ့ ပိုက်ဆံလဲ......
တစ်ကယ်တမ်းဆို သာအသက်က ၆နှစ်မျှသာ...။
ပိုက်ဆံကို ယူပြီး စုတတ်တာကလွဲလို့သားက မခိုးတတ်ပါ..။ကိုယ်က နားလည်ပေးထားသည်..သားမှာ ၀င်ငွေမရှိ၊ အလုပ်မရှိ..။
ဒီလိုယူမှသာ သူ့ စုဘူးလေးပြည့်နိုင်မည်..။ပြောသာပြောသည်..သူစုဘူးက တခါမှမပြည့်..။ သူ့ အမတွေနှင့် သူ့ မေမေ ဘတ်စ်ကား
စီးဘို့ အကြွေလိုလျှင် သူကဘဲ အမြဲထုတ်ပေးသည်။ သူမသိခင် ယူထားပြီး နောက်မှပြောရင်လည်း ပြသနာမရှိ..။
ကိုယ်တစ်ခုခု ၀ယ်မည်ဆိုလျှင် ..“ဖေဖေ ပိုက်ဆံမလောက်ရင် သားစုဘူးလေး ဖေါက်လိုက်ပါလား”ဟုသားက အမြဲပြောသည်
ကိုယ်ကိုတော့ သူပိုချစ်သလို ထင်ရသည်..။ ကိုယ့်ဆီက ဘယ်တော့မှ မယူ။ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝယ်ပေးရတာတွေကလည်းမနည်း..။
ကိုယ်က ကင်မရာကောင်းကောင်းတွေ့ လည်း ၀ယ်ချင်သည်...ပရိုဂရမ်အသစ်တွေပေါ်လည်းထပ်ဝယ်ချင်သည်...ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်တဲ့ 
ပရိုဂရမ်တွေ အားကျသည်..။အင်တာနက်မှာ ကြည့်ပြီး “ ဒါလေးတော့ ၀ယ်ထားမယ်ကွာ” လို့ ပြောသံ ကြားရင်......သူပြောမည်..။
“ ဖေဖေပိုက်ဆံလိုရင် သားစုဘူးလေး ဖေါက်လိုက်မယ်နော်” ဟု..။
ဒါသည်ပင်လျှင် ချစ်ခြင်းတရား၊ ဒါသည်ပင်လျှင် မိဘနှင့် သားသမီး၏ နွေးထွေးမှုဖြစ်သည်။
သားရဲ့ စုဘူးလေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကိုယ်ငယ်ငယ်က စုဘူးလေးကို နင့်နင့်နဲနဲ သတိရမိသည်..။ကိုယ့်ဘ၀မှာလည်း တစ်ခါဘဲ စုဘူးသည်။
ကိုယ့်အသက် ၁၁ နှစ်သားလောက်ကပေါ့..။ ကိုယ့်အထက်က အကိုက ၁၃ နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည်...။
စုဘူးကို သူက အရင်စုသည်...။ကိုယ်က သိတောင်မသိပါ..။
၁၁နှစ်နဲ့ ၁၃နှစ်အရွယ်မှာ ဘယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ရှိမှာလည်း...မုန့် ဘိုးလေးတွေစု..၊မိဘတွေ ဆီက တိတ်တ်ိတ်လေးခိုးစုပေါ့။
တစ်နေ့ ကျနော့် အကိုက သူ့ စုဘူးလေးကို ဖေါက်ပြီး အဖေနှင့် အမေကို ပေးတော့ “သိပ်တော်တာဘဲ၊ လိမ်မာလိုက်တဲ့ သား”ဟု
ချီးမွမ်းကြသည်...။ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ပေါ့..။
ကိုယ့် အကိုကို ချီးမွမ်းတာမြင်တော့ ကလေးပီပီ ကိုယ်ကလည်းချီးမွမ်းခံချင်သည်..မိဘကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီသော
သား လေးဖြစ်ချင်သည်၊ ဒါနဲ့ ဘဲ အဒေါ်ဖြစ်သူကို ပူဆာပြီး စုဘူးလေးဝယ်ခိုင်းသည်၊ အဒေါ်ကလည်းဝယ်ပေးပါသည်...။
စုဘူးလေးရပြီးကတည်းက ကိုယ်ရသမျှမုန့် ဘိုးလေးတွေစုသည်..၊ ကလေးချင်း သူတို့ ကြီုက်တတ်သည့် ၊ သူတို့ လိုချင်သည့် ပုံလေးတွေဆွဲပေးပြီး ရသမျှစုသည်..မကွယ်မ၀ှက်ပြောရလျှင် မိဘတွေ အမှတ်မဲ့ တင်ထားခဲ့သော အကြွေလေးတွေကို ခိုးစုသည်..
သူများတွေက ပိုက်ဆံစုဘူးလေးဖေါက်မည်ဆိုလျှင် စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်များမလဲ သိချင်စိတ်ဖြင့် ရင်တုန်ကြ၊
ရင်ခုန်ကြသည်..။ ကိုယ်ကတော့ စတင်စု ကတည်းက စာရင်းဇယားလေး လုပ်ထားလို့ ..ဒီနေ့ ထည့်တာနဲ့ ဆို ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာ ကြိုသိနေလို့ ရင်မခုန်ရပေမယ့် စုဘူးလေးဖေါက်ကာ မိဘတွေလက်ထဲ ပေးမည့် အချိန်လေးကိုတွေးပြီး ရင်ခုန်သည်။
လနှင့် ချီပြီးစုထားရာမှ သူငယ်ချင်းလိုချင်သော ဆေးရောင်စုံ ပုံလေးကို ညနေပိုင်းအထိ သူ့ အိမ်မှာဘဲ အပြီးဆွဲပြီးသည့် အချိန်တွင်
၁ကျပ်တိတိရသည့် အတွက် ကိုယ့်မှာ အရမ်းပျော်သည်...ဒီနေ့စုငွေ ၉၀ကျပ်တိတိပြည့်သည့်နေ့ ..။
အစကတည်းက အကို့လောက်မများတောင် ၉၀ တိတိ ပြည့်တာနဲ့ အဖေ၊အမေတို့ ကို ပေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်လို့ 
ဒီနေ့ပိုပျော်ရွှင်မိသည်...။
သူငယ်ချင်း မိသားစုကို နုတ်ဆက်ပြီး ရွှေဘိုမြင်းတစ်ကောင်လို အိမ်ကို ဒုန်းစိုင်းပြေးလာခဲ့သည်...။
ကိုယ့် အိမ်ရောက်တာနဲ့ စုဘူးလေးထားနေကြ တံခါးကြားလေးကို ကြည့် လိုက်တော့ကို ယ့်စုဘူးလေး မရှိတော့..။ ကိုယ့်ခေါင်းတွေ
မူးသွားမိသည်. ရင်ထဲမှာလည်းဆိုနင့်နင့်ဖြင့် ငိုချင်နေသည်..။ အမကိုမေးတော့ မပြောပါ..ညီမလေးကိုမေးတော့ သူမသိပါဘူးလို့့ပြောသည်..။ ကိုယ်သိပြီ၊ ကိုယ့်စုဘူးကို တစ်ယောက်ယောက်ယူလိုက်ပြီ.......၊
ကိုယ်ဘယ်သူ့ ကိုမှ မမေးရဲပါ..ကိုယ်ဝမ်းနည်းစွာငိုကြွေးမိသည်..မေးမည့် သူ ၊ချော့မည့် သူ မရှိပါ..။
တားဆီးမရ ဖြစ်ပေါ်လာသော အားငယ်မှုဖြင့် အိမ်ဘေးကအုန်းပင်လေးနားမှာ ကိုယ်ကျိတ်ငိုမိသည်..။
တော်တော်ကြာမှ အမေရောက်လာပြီးကိုယ့်ကို တစ်ခုခုနှင့် ပစ်ပေါက်လိုက်ပြီး...
“ ဟဲ့ သူခိုး ငိုမနေနဲ့ ကျက်သရေမရှိဘူး” ဟု ပြောကာ အနားမှထွက်သွားသည်..။ အမေပစ်လိုက်လို့ ခေါင်းကိုမှန်ပြီးနံဘေးမှာ ကျနေသော
အရာကို မျက်ရည်များကြားက ကောက်ယူကြည့်တော့ ဓါးဖြင့် ထိုးခွဲထားသော၊ပိန်လိန်နေသော ကိုယ့်စုဘူးလေးပါ...။
“ အမေရယ်...ကျနော့်ကို မမေးတော့ဘူးလား”
“ ကျနော့်ကိုရှင်းပြခွင့်မပြုတော့ဘူလား”
“ဒီ တစ်ညနေလေးတောင် မစောင့်ကြတော့ဘူးလား အမေ....ဒီတစ်ညနေလေးပါ”
“အမေ ဘာကြောင့် သူခိုးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သုံးပစ်လိုက်တာလည်း အမေ”
“ကျနော်လည်း အမေ့သားပါ အမေရယ်”
“ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မရှိ ၊၀င်ငွေမရှိတာချင်းအတူတူ အကို့ ကိုတော့ အမေတို့ ချီးမွမ်းခဲ့ တာ ဘာလို့ လဲ”
မမေးရဲပါဘူး မေမေ။ ကျနော်ဘာမှ မပြောရဲပါဘူး...။ ကျနော် အကျယ်ကြီးတောင် မငိုရဲပါဘူး....။
ကျနော့် ဘ၀မှာ ဒါပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး စုဘူးပါ မေမေ။
သားရဲ့ စုဘူးလေးကို ကိုယ်က နားလည်ပေးပါတယ်..သူက ကိုယ့်သားလေးပါ...။
ကိုယ့်အဖြစ်အပျက်နဲ့ စာနာပြီး စုဘူးလေးကို မကြည့်ပါ...စုဘူးလေးကိုကျော်ပြီး သားရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုဘဲကြည့်သည်။
တိတ်တိတ်လေး ယူသည့် အကျင့်ကို မလေ့ကျင့်ဘဲ.. ခွင့်တောင်းပြီးမှယူကာစုဘို့ ပြောပြသည်....။
သားစုသမျှကလည်း အကုန်လုံးဘတ်စ်ကား စီးဘို့ ပါလို့ သားပြောတော့ကိုယ့်မှာမျက်ရည်ကျမိသေးသည်...
ကိုယ့်ရဲ့ အဖြစ်လို ကလေးတွေကို မဖြစ်စေချင်ပါ...ကမ္ဘာမှာ ကလေးဦးရေ တော်တော်များပါသည်၊ ကလေးတို့ သဘာဝက
တစ်ယောက်ကစုဘူးလေးရှိတယ်ပြောလျှင် ကြားရသော ကလေးများလည်း ကိုယ်ပိုင်စုဘူးလေးတွေ လိုချင်ကြမှာ၊ စုချင်ကြမှာပင်..။
ကစားစရာလေးတွေဝယ်ဘို့ ၊ အဘွားကိုကန်တော့ဘို့ ၊အဘိုးကို ကန်တော့ဘို့ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးပင်...။
စုဘူးစုတတ်သော ကလေးများတို့ သည် ကိုယ်တို့ ၏ရင်သွေး၊ ကိုယ့်သားသမီးသာဖြစ်သည်..။
အနည်းငယ်မျှသော အကြွေလေးများကို ယူစုလို့ မိဘများ စီးပွားပျက်မသွားနိုင်ပါ။
သူတို့ ကို နားလည်မှုလေး ပေးထားရန်တော့ လိုအပ်ပါသည်..။
ကိုယ့် မိသားစုမှာ ကိုယ်ကအရာရာ အပြင်ဘက်က ဖြစ်နေတာကြောင့် ကိုယ့်အသက် ၁၆ နှစ် မပြည့်ခင်လေးမှာပင်
အိမ်ကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်..။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ဇာတ်မြှုပ်ပစ်ခဲ့ သည်..။
ကိုယ့်အသက် ၃၃နှစ် အရွယ်မှာတော့ဘယ်လိုစုံစမ်းပြီး မသိ ၊ဆက်သွယ်ကာ အတင်းခေါ်သောကြောင့် ကိုယ့်မိသားစု တခေါက်တော့
မိဘတွေဆီ သွားလည်ခဲ့ပါသည်...။အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ကလည်း အိမ်ပိုင်၊ခြံပိုင်၊ ရွှေနှင့်ငွေနှင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါ။
ကိုယ့်အမေက“ မင်း ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုဘဲလုပ်နေမှာလား၊ မင်းအကိုဆို အင်ဂျင်နီယာ၊ အရမ်းချမ်းသာနေပြီ၊မင်း လုပ်မယ်ဆို မင်း
အကိုကို အလုပ်တစ်နေရာ ရအောင်ပြောပေးမယ်”ဟု အမေကပြောသည်....။အမေ ပြောနေချိန်မှာ စုဘူးလေးကို ကိုယ်ပြန်မြင်ယောင်မိသည်။
ကိုယ်ကလည်း နည်းနည်းရင့်ကျက်နေချိန်မို့ အမေ့ကို စကားတစ်ခွန်း ပြန်ပြောခဲ့ ပါသည်...ထိုစကားလေးကြောင့်ပင်
နောက်တစ်ကြိမ် ဇာတ်မြှုပ်ခဲ့ ရပြန်ပါပြီ.....။
“ ကျနော်မခိုးတတ်ဘူး အမေ”
Posted by သစ်နက်ဆူး at 5:32 PM
wai lin September 14, 2008 at 12:40 AM
အက်ဆေးလေးလို့ ခံစားနေရာကနေ လှလှပပ ပစ်သွင်းလိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးကြောင့် ၀တ္ထုတိုကောင်းတပုဒ် ဖတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဗျာ။
ပုံရိပ် / Pon Yate September 14, 2008 at 6:15 AM
ကိုသစ်နက်ဆူး တကယ်ထိပါတယ်။ ကလေးဘ၀ရဲ့ ခံစားချက်က လူကြီးဖြစ်မှ ခံစားချက်ထက် ပိုပြင်းထန်ပါလိမ့်မယ်။
စူး September 14, 2008 at 8:01 PM
Moe Cho Thinn September 14, 2008 at 9:59 PM
ကလေးဘ၀ရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ကို လှပစွာ ခြယ်မှုန်းသွားတာလို့ ထင်ပါတယ်။
Taungoo September 14, 2008 at 10:33 PM
ဆူးတစ်ချောင်းက နောက်ဆုံးကျမှ ဘာလို့ ပစ်သွင်းလိုက်ရတာလဲဗျာ။ စကားလုံးအလှည့်က ရေးထားတာလှပေမယ့် သိမ်းကျုံးပြောတာတော့ ခံရခက်ခက်....
ဒါပေမယ့် ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်လိုသာ ခံစားလိုက်ပါသည်။
TNS September 15, 2008 at 7:31 AM
ကိုဝေလင်း၊ ပုံရိပ်၊ မြတ်နိုး၊မမိုးချိုသင်း။ကိုတောင်ငူသား
နှင့် စာဖတ် ပရိတ်သတ်များ..
.....လာရောက်လည်ပါတ်ပြီး အားပေးတဲ့ အတွက်
မိဘမေတ္တာကို နားလည်ပေးလို့ ရပေမယ့်...
မိခင်များကို စော်ကားလိုစိတ်တော့ မရှိပါ။
အထူးသဖြင့် ကိုတောင်ငူသားနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ပညာရှင်များကို မေတ္တာရပ်ခံ ချင်တာပါ။
အားလုံးကို မရည်ရွယ်ပါဘူး...ဒါပေမယ့် အဲဒီနေရာလေးမှာ တိုက်ရိုက်စကား( မင်းအကို အင်ဂျင်နီယာ) သုံးမှရမယ်လို့ ထင်လို့ ပါ...
တချို့ လို့ လည်းရေးမရ...ရေးရခက်နေပါတယ်...ကျနော်ကလည်း စာရေးသားမှု မကြွယ်ဝလို့့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
မမိုးချိုရေ... ကျနော့်ရဲ့ တကယ့် ကိုယ်တွေ့ လေးပါဗျာ။
တန်ခူး September 15, 2008 at 6:02 PM
ကြိုက်တယ်… ခံစားချက်လေးတွေကို ဖော်ညွှန်းတာ ပီပြင်တယ်… ကလေးလေးတယောက်မှာလဲ ခံစားချက်၊ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မေ့ထားလို့မရဘူးလေ… သူတို့ အိပ်မက်လေးတွေကို မဖျက်စီးမိဖို့သတိထားရမယ်နော်… နို့ မို့နှလုံးသားနုနုလေးတွေ အနာတရဖြစ်မှ…. နားလည်မှုဆိုတာ ဘယ်သူတွေကြားမှာ ဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ လှစ်ဟပြလိုက်သလိုပဲ...
ဂျစ်တူး - gyit_tu September 16, 2008 at 5:47 AM
ကိုဆူးပြတိုက် .. ကိုယ်တွေ့ ဆိုတာ သိရလို့ တကယ်စိတ်မကောင်းပါဖူး ။ မိဘဆိုတာကတော့ သားသမီးတိုင်းကို အတိုင်းအတာတခုထိ ချစ်ကြမယ်လို့ ကျမကတော့ ယုံကြည်မိနေမြဲပါ ။
အချိန်တွေက စုဗူးလေးကို ကုစားသွားနိုင်ပါစေ ။
TNS September 16, 2008 at 7:08 AM
လာရောက်အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ....
နောက်ပြီး အပြန်အလှန်နားလည်မှု ဆိုတာကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်...ကျနော်လိုချင်တာ
ကျနော့်လို ခံစားရတဲ့ သားသမီးတွေ ဘယ်လောက်များမယ်ဆိုတာ မသိရပါဘူး..
ကျနော်တို့ တွေ မိဘ ဖြစ်တဲ့ အခါ...သတိထားဘို့ 
မတန်ခူးတို့ မိသားစုလေးကို အရမ်းအားကျမိပါတယ်..။
ညီမပြောတဲ့မိဘတွေ ဆိုတာ သားသမီးကို အတိုင်းအတာ တခုထိချစ်ကြမယ်ဆိုတာကို ကျနော်လက်ခံပါတယ်...။ဒါပေမယ့် ညီမရယ်..
လူသားတဦးချင်းရဲ့ကံတရားကဆန်းကြယ်ပါတယ်..။
ကျနော် ကံမကောင်းခဲ့ ပါဘူး...။
ကောင်းကင်ကို September 17, 2008 at 7:57 AM
maung October 8, 2008 at 4:46 PM
ဆူးတွေ တချောင်းပြီး တချောင်းဆူးသွားတယ်။
ကိုယ်ကိုက .. ဆူးပြတိုက်ထဲ ၀င်မိသူကိုး ...
SDL December 6, 2008 at 10:17 PM